China 1.5 onwe mkpọpu ala ịghasa ụlọ ọrụ na-emepụta | Shuangyang
Neurosurgery mweghachi na nwughari, rụzie ntụpọ cranial, nyere aka wughachi ọkara ma ọ bụ nnukwu mkpa kranium, dozie ịghasa na efere ọkpụkpụ.
Ihe: ọgwụ titanium alloy
• titanium alloy dị iji nweta ihe kachasị mma na mgbanwe kachasị mma
• Switzerland TONRNOS CNC akpaka ịcha lathe
• pụrụ iche ọxịdashọn usoro, mma ịghasa si n'elu ekweghị ekwe na-eyi ndị na-eguzogide
obe isi ịghasa ọkwọ: SW0.5 * 2.8 * 75mm
Ejiri obere profaịlụ dị ala na-enye aka n'akụkụ ya na profaịlụ efere dị iche iche na-enye ihe ọ bụla. Dị na ọtụtụ ndị ọzọ ahaziri ogologo.
Uru nke titanium alloy kposara ：
1. Ike dị elu. Njupụta nke titanium bụ 4.51g / cm³, nke dị elu karịa nke aluminom na nke dị ala karịa nke ígwè, ọla kọpa na nickel, mana ike dị elu karịa nke ọla ndị ọzọ. Rewghasa nke titanium alloy bụ ọkụ ma sie ike.
2. Ezigbo nguzogide corrosion, titanium na titanium alloy na ọtụtụ mgbasa ozi na-adị nnọọ ike, a ga-etinye ihe nkedo alloy titanium n'ọtụtụ dịgasị iche iche na-emebi emebi.
3. Ezigbo nguzogide okpomọkụ na obere okpomọkụ resistance.Titanium alloy screws nwere ike ịrụ ọrụ na okpomọkụ ruo 600 Celsius C ma wepu 250 Celsius C, ma nwee ike ịnọgide na-enwe ọdịdị ha na-enweghị mgbanwe.
4. Na-abụghị magnetik, na-adịghị egbu egbu.Titanium bụ metal anaghị arụ ọrụ ma ọ gaghị magnetized na magnetik dị elu nke ukwuu.Ọ bụghị naanị na-anaghị egbu egbu, ma nwee mmekọrịta dị mma na ahụ mmadụ.
5. Ike mgbochi damping arụmọrụ.Comed na ígwè na ọla kọpa, titanium nwere ndị fọdụrụ n'ezinụlọ vibration attenuation oge n'ibu vibration na electric vibration.This arụmọrụ nwere ike ji mee dị ka tuning ndụdụ, vibration mmiri nke ọgwụ ultrasonic egweri na vibration fim nke elu audio okwusike. .
Eriri imewe maka ngwangwa ịghasa amalite na ala ntinye torque. Nhọrọ nke efere na ntupu, gụnyere mastoid na meshes, na oghere burr maka shunts.
The tighter ịghasa, mma?
A na - ejikarị ịghasa na ịwa ahụ na-eme ka ebe a na-agbaji agbaji, dozie efere ahụ na ọkpụkpụ, ma dozie ọkpụkpụ ahụ n'ime nhazi nke ime ma ọ bụ nke mpụga. dọkịta na-awa.
Agbanyeghị, ka ike ọnụọgụ ahụ na - abawanye, nkedo ahụ na - enweta ikike kachasị ike (Tmax), bụ nke ebe ikike njigide nke ọkpụkpụ na - ebelata ma dọpụrụ ya obere obere. gbagọrọ agbagọ nke ọkpụkpụ. A na-ejikarị ya dị ka oke iji tụọ ike njide nke nkedo ahụ. Ugbu a, mmekọrịta dị n'etiti ikike kachasị na ike ndọpụ ka amabeghị.
N'ihe nyocha, ndị dọkịta na-awa ahụ na-etinyekarị ihe nkedo banyere 86% Tmax. Otú ọ dị, Cleek et al. achọpụta na ntinye 70% Tmax na tibia nke atụrụ nwere ike nweta POS kachasị, na-egosi na enwere ike iji ike torsion mee ihe n'ụlọ ọgwụ, nke ga-ebelata nkwụsi ike nke ndozi.
Nnyocha nke humerus na cadavers mmadụ na nso nso a site na Tankard et al. chọpụtara na e nwetara POS kachasị na 50% Tmax. Isi ihe kpatara ọdịiche dị na nsonaazụ ndị dị n'elu nwere ike ịbụ enweghị nkwekọ nke ụdị eji na ụkpụrụ nha dị iche iche.
Ya mere, Kyle M. Rose et al. si United States tụrụ mmekọrịta dị n'etiti Tmax na POS dị iche iche site na kposara etinyere na tibia nke ozu mmadụ, ma nyochaa mmekọrịta dị n'etiti Tmax na BMD na oke ọkpụkpụ ọkpụkpụ. E bipụtara akwụkwọ akụkọ ahụ n'oge na-adịbeghị anya na Usoro na Orthopaedics. enwere ike inweta POS kachasị na POS yiri nke a na 70% na 90% Tmax na ntanye, na POS nke 90% Tmax screw torque dị ukwuu karịa nke 100% Tmax. Enweghi ihe di iche na BMD na nkwekorita nke di n'etiti ndi tibia, ma odighi nmekorita n'etiti Tmax na ihe abuo abuo. Ya mere, na usoro ọgwụgwọ, onye dọkịta na-awa ahụ ekwesighi iji ike torsion siri ike, mana ya na obere iyi erughị Tmax. Ọ bụ ezie na 70% na 90% Tmax nwere ike nweta POS yiri nke ahụ, enwere ụfọdụ uru iji megharia ihe ahụ, mana ọnụọgụ ahụ agaghị agafe 90%, ma ọ bụghị ya, a ga-emetụta mmetụta mmezi ahụ.
Isi mmalite: Mmekọrịta dị n'etiti Mgbapu Ntinye na Ike Pullout nke Screws ịwa ahụ.Techniques na Orthopedics: June 2016 - Mpịakọta 31 - Nke 2 - p 137-139.
Nke gara aga: anatomical titanium ntupu-3D ifuru udi
Osote: 2.0 mkpọpu ala nke onwe
Self Drilling ịghasa Price
Self Drilling Titanium ịghasa
orthognathic 0.6 L efere 6 oghere
maxillofacial trauma mini anatomical nko efere
akpọchi maxillofacial micro T efere